တစ်ဦးကခရီးသည် Pirelli ပါစိတ်ချရသောနှင့်သိမ်းဆည်းသိကောင်းစရာများ မှစ. - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[18 / 08 / 2019] အခြားသော Eskisehir ထံမှအမျိုးသား Express ကိုရထားတူရကီအတွက်ထုတ်လုပ်မပါ	26 Eskisehir
[18 / 08 / 2019] Google က Apple, Microsoft ကမီးရထားအဆင့် Crossing ဂရုမစိုကျဘူး	1 အမေရိကတိုက်
[18 / 08 / 2019] အဆိုပါ3အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်၌တည်၏။ သီချင်းများတိုးတက်ရေးပါတီ Making	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[17 / 08 / 2019] ယဇ်ပူဇော်အသား TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခဲ့သည်	06 တူရကီ
[17 / 08 / 2019] ဇွဲRaybüsBatmanlılar	72 Batman
Homeလောကဥရောပ39 အီတလီPirelli ပါစိတ်ချရသောနှင့်သိမ်းဆည်းသိကောင်းစရာများထံမှတစ်ဦးကခရီးသည်
08 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 39 အီတလီ, ဥရောပ, လောက, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
အဆိုပါအကြံပေးချက်များအပေါ် Pirelli အကျိုးရှိစွာနှင့်ဘေးကင်းခရီး
အီတလီယာကုမ္ပဏီကြီး Pirelli ကြောင့်ရှေ့ဆက်မယ့်မနက်စောစောအားလပ်ရက်များ၏ယာဉ်မောင်းအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လောင်စာစီးပွားရေးကိုပေးမယ့်သတိပေးချက်ပါပဲ။ အဆိုပါအထူးသယာအတွက်မမှန်ကန်ကြောင်းလေထုဖိအား, တာယာ၏လျှော့ချနင်းအတိမ်အနက်, (လူဦးရေအကြားတွင်ပူဖောင်းသို့မဟုတ်အခွံမာသီးကိုခေါ်) ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်အတွက်တာယာတှငျးကျဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်မြင့်တက်ရာမှရရှိလာတဲ့မောင်းနှင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအန်တရာယျဝါယာကြိုးအရိုးကျိုး၏ကြမ်းတမ်းရှိမရှိအပေါ်မူတည်ပြီးအလွန်အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့နှင့်အခြေခံပိတ်ပင်တားဆီးမှုများအကြားဖွဲ့စည်းခဲ့ဒါကိုတော့ဖြစ်ကြသည်။ သင့်လျော်သောဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် +7ဒီဂရီအထက်အပူချိန်အတွက်အသုံးမပြုကြောင်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတာယာ၏နွေရာသီမှာတော့သိသိသာသာလောင်စာသုံးစွဲမှုတိုးပွားစေပါသည်။
ဒါဟာလူ့ပွဲတော်များနှင့်အားလပ်ရက်များအတွက်လမ်းမှယူဖို့ပြင်ဆင်နေသည်ယခုနှစ်သြဂုတ်လထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတူမနက်စောစောတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်။ ကြောင့်ပူလေကြောင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုစီးဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ, မိုးသည်းထန်စွာအသွားအလာ၏ယာဉ်မောင်းမှလာမယ့်နွေရာသီအားလပ်ရက်ရန်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာယာသို့ယူလုံခြုံလမ်းခရီးဘို့နွေရာသီ၏စည်းမျဉ်းများ, လိုအပ်သောထိန်းချုပ်မှုအလွန်အရေးကြီးသည်များမှာပါစေ။
ယာဉ်သာကွန်နက်ရှင်ရှည်လျားသောခရီးကိုသိသိသာသာတာယာဝတ်ဆင်ရန်ဘာသာရပ်, နင်းအတိမ်အနက်, ဒါကိုတော့သို့မဟုတ်မရှိခြင်းပူဖောင်းတာယာအတွက်စဉ်းစားရမည့်ကိစ္စရပ်များများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနဲ့ဖိအားတိုးမြှင့်ဖို့လမ်းနှင့်အတူ, ထိုသို့သောဥတုနှင့်အညီဖြစ်ပေါ်အဖြစ်စံလာသည်။
အထူးသဖြင့်တာယာအသေးစားဖြတ်တောက်မှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ်အက်ကြောင်းအဆိုပါဘေးနံရံဆလင်ဒါအတွက်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်မိုးသည်းထန်စွာဝန်အခြေအနေများအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်, ပြန်တယ်နဲ့ရှော့ခ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ရာ၏ရလဒ်အဖြစ်တာယာ၏မမြင်ရတဲ့အတွင်းဘက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ကိုအခြားအတားအဆီး။ ခရီးနာရီကြာမြင့်အတင်းအကျပ်ဒါကိုတော့နှင့်ပူဖောင်းတာယာ, wear နှင့်အတူယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, သင့်တာယာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ် check လုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ တာယာဖွဲ့စည်းပုံမှာ (ထိုကဲ့သို့သောအမြင့်သို့မဟုတ်ပူဖောင်းအဖြစ်တာယာဘေးနံရံပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့ protrusion) အတွက်စေသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဘေးကင်းလုံခြုံမှုကားမောင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌မသင့်တော်ဖြစ်တာယာကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။
သင့်ရဲ့တာယာ wear ပျက်ကျမှုတစ်ခုဖိတ်ကြားချက်ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါစေ
အဆိုပါတာယာ၏ခရီးနင်းအတိမ်အနက်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နောက်ထပ်ပြဿနာ။ အစားလုံးပတ်တလျှောက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများမှာတစ်ခုတည်း point ရဲ့သင့်ရဲ့တာယာ wear နှင့်တာယာအကျယ်ကိုတိုင်းတာရပါမည်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော wear မလျော်ကန်သော setting ကိုသို့မဟုတ်ပါကလည်းဆုံးဖြတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်ဖိအားအဆင့်ကနေဖြစ်စေနိုင်တယ်။
သင်တစ်ဦးခရီးဝေးနှင့်သင့်တာယာ wear သွားနေတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်အကြီးအအရေးပါမှုသည်တာယာအစားထိုးမြင့်မားသည်။ ထို့အပြင်ယာနင်းနက်ရှိုင်း၏လျှော့ချရေးကိုလည်းမတော်တဆမှုဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ရင်တောင်ဥပဒေကန့်သတ်တာယာ wear အောက်တွင်သင့်နင်းအတိမ်အနက်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်လေးနက်သောအချိုးအစားရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နွေရာသီမိုဃ်းကိုရွာစေခြင်းသို့မဟုတ်ကြာကြာရပ်တန့်အကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်နိုင်သမျှမကောင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင် aquaplaning များ၏အန္တရာယ်မော်တော်ယာဉ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့တာယာ၏လေဖိအားကိုစစ်ဆေးတဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်သွားခင်မှာအခြားဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်ဤထိန်းချုပ်မှုလမ်းတာယာအဘို့ဖြစ်စေသေးအအေးဖြစ်ကြသည်။ ဒီ tool ကြောင့်ခရီး၏ installed ကြောင့်ဤကာလများတွင်ရာသီဥတုကြောင့်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ငှါ, တာယာလေဖိအားပြောင်းလဲမှုများပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်တစ်လျှောက်အနည်းငယ်ကီလိုမီတာပြီးနောက် overheat မယ်။ ဝန်အခြေအနေများ၏တန်ဖိုးကိုစဉ်းစားသင့်ရဲ့တာယာလေဖိအား, ကားထုတ်လုပ်သူများကအကြံပြုထားရပါမည်။ ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများလည်းတံခါးကိုအတွင်းပိုင်း, အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ထုတ်ယူခြင်းကိုလည်းလက်အိတ်အခန်းတွင်သို့မဟုတ်လောင်စာဦးထုပ်ထဲမှာတည်ရှိနေပေမည်။ သင်သည်မည်သည့်အနှုတ်လက္ခဏာအခြေအနေမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အားလပ်ချိန်မှာယာရှိပါကလည်း, သငျသညျစိတျထဲမှာထားသငျ့နှငျ့သငျအများဆုံးအကြံပြုဖိအားအမှု၌ကြောင့်အဆင်သင့်ရှိသင့်ပါတယ်။
+7ဒီဂရီနှင့်ဆောင်းရာသီတာယာအတွက်အသုံးပြုပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်ကိုလည်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လောင်စာသုံးစွဲမှုအတွက်အလွန်သိသာအားနည်းချက်ရှိုး။ နွေရာသီမှာတော့ကျနော်တို့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတာယာကိုအသုံးပြုပါဆက်လက်သင့်သည်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်စီးပွားရေးကျနော်တို့နှစ်သိမ့်လည်ရန်ရှိသည်ဆိုလို။ ADAC - ဂျာမန်မော်တော်ယာဉ်ကလပ် (အထွေထွေဂျာမန်မော်တော်ယာဉ်ကလပ်) စာမေးပွဲများအတွက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတာယာ၏နွေရာသီကဆောင်ရွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အကွာအဝေး 44 ရာခိုင်နှုန်းကိုအသုံးပြုမှုနှုန်းကိုရပ်တန့်စေပါတယ်။
အားလုံးလိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ, အရေးအပါဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျန်ရှိသင့်ရဲ့တာယာ, ရေပေါ်မှာပြီးစီးခဲ့ရေနံနှင့်ထိုကဲ့သို့သောရေနှင့် Wiper အဖြစ်အရည်များ၏အဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အခါဖြည့်စွက်ရန်ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။ ထိုအခါသင်တို့သည်လည်းဘရိတ်အလင်းအိမ်နှင့်လိုင်စင်ပန်းကန်ဘောင်အလင်းအိမ်အပါအဝင်ချွင်းချက်မပါဘဲအားလုံးအလင်းအိမ်နှင့်မီးသီးစစ်ဆေးရန်မေ့လျော့မထားရပါ။
အခုတော့ပါစိတ်ချရသောAkçarayနှင့်အတူသွားရောက်ကာ 13 / 02 / 2019 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လမ်းကြောင်းအပေါ်အသွားအလာနှင့်လမ်းသွားလမ်းလာမှအဆောက်အဦးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေတာ expropriation ဖွဲ့စည်းရန်Akçarayအနုတ်လက္ခဏာခွအေနမြေား။ ဤအခြေအနေတွင်နောက်ဆုံးတော့ သာ. ကွီးမွတျ; အဆောက်အဦးပြည်သူပိုင်ရာတူရကီ Market ကလမ်းလမ်းဆုံများတွင်မိုးသည်းထန်စွာအသွားအလာပြဿနာတွေပပျောက်ဖို့ဘဂ္ဂဒက်လမ်းထောင့်နှင့်အတူအရှေ့ Barracks ဘူတာ၏ Izmit မြို့။ မြို့တော်အလုပ်ပြီးစီးသည့်အခါရွှေ့ပြောင်းဖြိုဖျက်သမားတွေတည်ဆောက်ခြင်း, လမ်းချဲ့ထွင်မှုအလုပ်စတင်ပါလိမ့်မယ်ဖြိုချလာတယ်။ Kocaeli လမ်းကြောင်းAkçarayအတွက်လမ်းရထားပရောဂျက်ဝယ်ယူ Izmit နယ်ပယ်အများပြည်သူနှင့်အရှေ့ Barracks ဘူတာ, လမ်းထောင့် Bagdat Caddesi အတူလမ်းဆုံမှာတည်ရှိပါတယ်အဆောက်အဦးအမှုဆောငျဖို့စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရ, ထိုဆုံးဖြတ်ချက် expropriation အဘို့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီကာလ၌ ...
ယင်းကို Safe ခရီးကားAkçaray 29 / 11 / 2018 ကကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုများ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်ulaşımpark Inc က Kocaeli ၏လူအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် 1 နှစျကျြောAkçarayပြေး။ နံနက် 06: ညဉ့်အခါ 00 24: Kocaeli ထံမှ 00, Izmit ခရိုင်အတွင်းရှိမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းရထားသက်သာရာ, ကတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွက် Kocaeli ကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဦးစားပေးနည်းလမ်းများဖြစ်လာသည်။ Akçarayလမ်းရထားလိုင်းကိုအတွက်မော်တော်ယာဉ်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခရီးသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အခါအားလျော်စွာပြုမိနေပါသည်။ MAINTENANCE တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်6ulaşımparkအထူးကုစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့က DONE, နိုင်ငံသားများ6ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုံခြုံခရီးစေရန်တစ်ဦးချင်းစီမော်တော်ယာဉ်များအတွက်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြုမိသည်။ ဤအခြေအနေတွင်410 တထောင်ကြိမ်မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, 1 အဆ ...
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပါစိတ်ချရသော Mersin အတွက်ရယူ 18 / 04 / 2018 Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အားလုံးတက္ကစီ, ဝန်ဆောင်မှုမော်တော်ယာဉ်များ, minibuses နှင့်ဘတ်စ်ကားစောင့်ကြည့်ခံရဖို့လက်ငင်းစွမ်းရည်ကိုဆိုလိုသည်နှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစွမ်းရည်နှင့်အတူလုံခြုံရေး devices များနှင့်အတူတပ်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ Mersin နေ့စဉ်ပျမ်းမျှအား 200 တထောင်ကလူဘတ်စ်ကားနှင့် minibuses ပါဝင်သည်ဟု Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်ကိုအပြည့်အဝလုံခြုံမှုပါလိမ့်မည်အသုံးပြုပုံရှိသမျှကိုအငှားယာဉ်များသွားလာ။ နိုင်ငံသားများစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၌ခရီးပိုရှည်ခရီးကိုလုပ်ခွင့်ပြုမယ့်လုံခြုံရေးလျှောက်လွှာများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနထိုကဲ့သို့သောခိုးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်အဖြစ်များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်, အလေ့အကျင့်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်မောင်းမှအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးက ...
Kocaeli တစ်ဦးပါစိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြေပေါ်ပေးသွားမှာပါ 07 / 06 / 2019 ပါမောက္ခKABAOĞLUရပ်ကွက်များက Izmit Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏မြို့ ထုတ်လုပ်မှု built Baki Komsuoğluလမ်းမြေပေါ်လူကူးတံတားအတွက်သံမဏိအားဖြည့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နေထိုင်ရာထိပ်မှာTÜRGEVလမ်းမြေပေါ်နှင့်လူမျိုး၏လူကူးကူးဖြတ်ပြီးလုံခြုံတဲ့လမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုမှု 70 IN သံမဏိများထုတ်လုပ်ခြင်းတန်ချိန်မြေပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ယခုသံမဏိခွကေိုကိုင်တွယ်ရာအရပျ၌ထားခဲ့ပါတယ်ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုယူမြေပေါ်လူကူးတံတား၏အရပျကိုခွင့်ပြုဘယ်မှာသံမဏိစုစုပေါင်းတန်ချိန်တင်ခြင်းဟာ 70 အဓိကကိုယ်ထည်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြေပေါ်ဓာတ်လှေကားမျှော်စင်၏ installation ပြီးစီးခဲ့သည်။ Double LIFT ၏KABAOĞLUရပ်ကွက်ပါမောက္ခ BE မညျ လမ်းပေါ်မှာ Baki Komsuoğlu ...
ကို Safe နှင့်အတူကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုခရီးပျော်မွေ့ 04 / 03 / 2015 Uludag နှင်းလျှောစီးပျော်ရွှင်မှုကို Safe ခရီးနှင့်အတူအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ: Bursa Cableway Inc ကို, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမတော်တဆမှုအာမခံနှင့်အတူဧရိယာ၌ခရီးသွားလာခရီးသည် insuring Teferrüç-ဟိုတယ်။ Bursa ၏သင်္ကေတနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုယင်း၏ခေတ်မီမျက်နှာအစေခံရန်စတင် Uludag လုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အစာရှောင်ခြင်းသက်သာနှင့်စီးပွားရေးစီးနင်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာပေးထားပါတယ်။9အကြားTeferrüç-ဟိုတယ်ခရိုင်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကေဘယ်လ်ကားလိုင်းသောခရီးသည်တင် cable ကိုကားများနှင့်အတူအရှည်ကီလိုမီတာ, အ Inc မှနေဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမတော်တဆမှုအာမခံနှင့်အတူ Bursa ကေဘယ်လ်ကားမရှိတော့ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာ Uludag ဖြစ်လိမ့်မည်။ ချွေတာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အဦ, 1 ရာပူဇော်သက္ကာကို cable ကိုကားထဲတွင်စစ်ပြန်နှင့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်။ အာဇာနည်၏ဘွဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများ, အဝါရောင်စာနယ်ဇင်းကဒ် ...
Uludag ကို Safe နှင့်အတူကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုခရီးခံစားကြည့်ပါ 04 / 03 / 2015 Uludag နှင်းလျှောစီးပျော်ရွှင်မှုကို Safe ခရီးနှင့်အတူအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ: Bursa Cableway Inc ကို, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမတော်တဆမှုအာမခံနှင့်အတူဧရိယာ၌ခရီးသွားလာခရီးသည် insuring Teferrüç-ဟိုတယ်။ Bursa ၏သင်္ကေတနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုယင်း၏ခေတ်မီမျက်နှာအစေခံရန်စတင် Uludag လုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အစာရှောင်ခြင်းသက်သာနှင့်စီးပွားရေးစီးနင်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာပေးထားပါတယ်။9အကြားTeferrüç-ဟိုတယ်ခရိုင်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကေဘယ်လ်ကားလိုင်းသောခရီးသည်တင် cable ကိုကားများနှင့်အတူအရှည်ကီလိုမီတာ, အ Inc မှနေဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမတော်တဆမှုအာမခံနှင့်အတူ Bursa ကေဘယ်လ်ကားမရှိတော့ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာ Uludag ဖြစ်လိမ့်မည်။ ချွေတာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အဦ, 1 ရာပူဇော်သက္ကာကို cable ကိုကားထဲတွင်စစ်ပြန်နှင့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်။ အာဇာနည်၏ဘွဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများ, အဝါရောင်စာနယ်ဇင်းကဒ် ...
Petlas နေ့ကနေကို Safe ခရီးများအတွက်အကြံပြုချက်များ 08 / 06 / 2018 တူရကီရဲ့တာယာ Petlas အားလပ်ရက် secure နှင့်သာယာသောခရီးများအတွက်အရေးပါသောအချက်အာရုံစိုက်ထားပါတယ်။ Petlas လည်းလုံခြုံပြီးပျော်စရာခရီးကျော်လွန်ပှဲအထောက်အကူပြုရန်, ယာဉ်မောင်းတူရကီအတွက် 500 ထိန်းချုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုထက် သာ. အခမဲ့ယာကုန်သည်တွေပေးဘို့ကိုချွတ်ယူပြင်ဆင်ကြ၏။ ကြောင့်မိသားစုနှင့်မနက်စောစော Al-Fitr အားလပ်ရက်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လမ်းမှယူဖို့ပြင်ဆင်နေကျနော်တို့နိုင်ငံမှာလူအတော်များများ, တူရကီရဲ့တာယာလုံခြုံပြီးပျော်စရာခရီး၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးဖို့တစ်ချိန်ချိန် Petlas ။ အနှစ်ချုပ်မှစျေးကွက်ဒါရိုက်တာ Erkal တောင်းပန်ပါတယ်, အားလပ်ရက်ခရီးသွားအတွက်လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုအာရုံကိုဆွဲငင်ကြောင်း Petlas အချက်။ ယာဉ်မောင်းလုံခြုံမှု, အန္တရာယ်ကင်းမောင်းနှင်မှုများအတွက်ယာစတင် ...
အိုင်ပက် app ကိုနှင့်အတူဘေးကင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထံမှ GEFCO 11 / 04 / 2014 ဘေးကင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူအိုင်ပက် app ကိုထံမှ GEFCO: GEFCO, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် operating ဖောက်သည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါကုမ္ပဏီအတွင်းတစ်ဦး Ultra-ဆန်းသစ်အိုင်ပက် application ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဤသည်က iPad app ကိုမော်တော်ယာဉ်တင်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။ ကွင်းဆင်းအကောင့်သို့ဘေးကင်းမော်တော်ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယူပြီး, ရည်ရွယ်လျှောက်လွှာများ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်လိုအပ်ချက်များကိုစေမည်။ အဆိုပါ iPad ကို app ကိုလည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း GEFCO Group ၏ခုနစ်ခုအပင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဒီဇိုင်းယခုအချိန်တွင်လျှောက်လွှာမှာ 2011 GEFCO FVL (ပြီးဆုံးယာဉ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး) ခုနှစ်တွင် .. ယာဉ်တင်ကြီးကြပ်သောအဖွဲ့ကကူညီကြလိမ့်မည် "တပ်ဆင်ခြင်း Checker ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနဲ့ controller ၏နေ့စဉ်အလုပ်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်တီထွင်" ...
အဆိုပါ Coruh အပေါ်ရပ်ဆိုင်းမှုတံတားအခုဆိုရင်ပိုမိုလုံခြုံတဲ့ 01 / 07 / 2014 အခုဆိုရင်ပိုမိုလုံခြုံသည့် Coruh အပေါ်ရပ်ဆိုင်းမှုတံတား: မြို့တွင်စင်မြင့်ကနေ Artvin'in Borçkaချိုးပြန်ပိတ်ထားတဲ့ drawbridge မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး access ကိုမှပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့ခြင်္သေ့ atan, အÇoruhကျော်ရပ်ဆိုင်းမှုတံတားအသစ်မြို့တော်ဝန်က, ခရိုင်ကလည်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်သင်္ကေတတံတားဖြစ်ပါတယ်ထင်ဟပ်ကဆိုသည်။ ခရိုင်ဒေသခံများကစိုက်ရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ AK ပါတီခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌŞükrüပြန်လည်သုံးသပ် Erturk နှင့်အတူလေ့လာမှုများကိုတွေ့ပူးတွဲခြင်း, မြို့တော်ဝန် Aslan Ozturk atan နှင့်အတူတံတားဖွင့်လှစ်။
လမ်းများပိုမိုလုံခြုံဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် 30 / 03 / 2015 လမ်းများပိုမိုလုံခြုံဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်: Kadir ကထောက်ခံသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနစီမံကိန်းကိုတက္ကသိုလ်ရှိထားသောကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာ-တာဝန်ယာဉ်များ၏အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်နှင့်ဘေးကင်းကားမောင်းညဉ့်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားပေးအားမြှောက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ လေးလံသည့်-ရွေ့လျားရိန်းကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, အတူတကွကဏ္ဍ၏ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ Kadir ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုအဘို့ပြုခြင်းနှင့်တင်သွင်းခံရဖို့လိုအပျခတည်ခင်းဧည်, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်တက္ကသိုလ်ရှိထားသည်။ Kadir တစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စီမံကိန်းကို Kadir အသုံးချသိပ္ပံဌာနဒင်းတက္ကသိုလ်မှ Assist ရှိထားကြောင်းညွှန်ပြလည်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏နယ်ပယ်ကထောက်ခံ, တက္ကသိုလ်ရှိထားသည်။ Assoc ။ ဒေါက်တာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အတူရကီအတွက်တက္ကသိုလ် Omar Faruk gorci တစ်ဥပဒေရေးရာ ...
အဆိုပါ3အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်၌တည်၏။ သီချင်းများတိုးတက်ရေးပါတီ Making
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 18 1875 Anatolia နှင့် Rumelia က
Adana, အကျင့်ပျက်လမ်းဘေး Kalmayacak အတွက်လူတွေမှာလမ်းများ
Mersin မြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Da အကောင်းဆုံးရှာဖွေနေ
Gaziantep GAR Lodge ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလက်ခံခြင်း
150 တထောင်ခရီးသည်Akçaray Streetcar နေ့အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်
IMO Izmir ဌာနခွဲ '' Izmir ငလျင်မဟုတ်အသင့်ဖြစ်ပြီလား '' သတိပေးချက်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 17 1869 Hirsch က, Lombarda
အစ္စတန်ဘူလ်ပွဲနှစ်မြောက်၏ Metro xnumx'inc
20: သြဂုတ်လ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပစ္စည်းကိရိယာ CCTV System ကိုများအတွက်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
20: သြဂုတ်လ 14 00 @ - 15: 00
21: သြဂုတ်လ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အဆင့် Crossing အဆင့်ဟာထိန်းအကွပ်မဲ့ Crossing ဖြစ်လာထံသို့ယူဆောင်
21: သြဂုတ်လ 10 30 @ - 11: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လမ်းမကြီးလက်အောက်တွင် / မြေပေါ်စီမံကိန်းအဘိတ်
22: သြဂုတ်လ 14 00 @ - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Led အမျိုးအစား xnumx'l အမြင့် Signal Reception
22: သြဂုတ်လ 14 30 @ - 15: 30
Denizli တင်ဒါရလဒ်မှာတွေ့ရှိ B ကိုအချက်ပြလိုင်း၏ကို Maintenance အပေါင်းအဖေါ်များဖျော်ဖြေ
အမှတ်တရကတော့တင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင် Switch Çankırı
Divrigi Kayseri လုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ်မှာမီးရထားတံတား၏တိုးတက်မှုတွေ့ရှိခဲ့
Divriği Erzincan ရထားလမ်းတံတားလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်မှာတွေ့ရှိတိုးတက်စေူခင်း
ယင်းကို Safe ခရီးကားAkçaray
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပါစိတ်ချရသော Mersin အတွက်ရယူ
ကို Safe နှင့်အတူကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုခရီးပျော်မွေ့
Uludag ကို Safe နှင့်အတူကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုခရီးခံစားကြည့်ပါ
Petlas နေ့ကနေကို Safe ခရီးများအတွက်အကြံပြုချက်များ
အိုင်ပက် app ကိုနှင့်အတူဘေးကင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထံမှ GEFCO
အဆိုပါ Coruh အပေါ်ရပ်ဆိုင်းမှုတံတားအခုဆိုရင်ပိုမိုလုံခြုံတဲ့
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (267) ဇူလိုင်လ 2019 (636) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (619) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (518) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (665) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (831) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)